Dhadhaab: Dabley weerar khasaare geystay ku qaaday shaqaale Qaramada Midoobay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhadhaab – Mareeg.com: Gaari ay leedahay Qaramada Midoobay ayaa laga afduubay deegaanka Dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku yaallaan xeryo qoxooti oo ay ku jiraan in ka badan nus malyuun qof oo Soomaali ah u badan.
Saraakiil u hadlay xukuumadda dalka Kenya ayaa sheegay in saaka oo arbaco aheyd gaarigan ay lahayd Qaramada Midoobayay koox huberysan ay ka afduubeen xerada Xagardheer oo ka tirsan xeryaha Dhabaab.
Guddoomiyaha deegaanka Faafi, Geoffrey Taragon ayaa u sheegay warkaaladda wararka Shiinaha in saddex xubnood oo ka tirsan Al-shabaab ay qafaasheen gaariga oo noociisu ahaa Nissan Patrol kaddib markii ay rasaas ku fureen darawalkii gaariga, kaasoo uu dhaawac gaaray.
“Waxaan xaqiijin karnaa in gaariga loola tallaabay dhinaca Soomaaliya, waxaana socda dadaallo lagu doonayo in lagu soo qabto,” ayuu yiri Geoffrey Taragon.
Weerarka oo dhacay abaaro 8:30 A.M ee xiliga geeska Afrika ayaa lagu soo waramayaa in qofka dhaawac ah loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta Kenya.
Warku waxa uu intaa ku darayaa in haweeney ka mid ahayd shaqaalaha hay’adda UNHCR oo la doonayey in la afduubo ay ka badbaaday weerarkaas.
Markii kooxdaasi gari afduubeen ayaa waxaa ceyrsaday ciidamada amaanka Kenya, waxaana markii dabme gaarigaas laga soo helay dhul miyi ah, kadib markii uu iskiis u istaagay.
Horay ayaa waxaa xeryaha Dhadhaab dhowr jeer oo hore looga afduubay shaqaale ajanbi ah, kuwaasoo qaarkood la geeyey Soomaaliya.